Khayre oo la kulmay gudoomiyaha Aqalka Sare | KEYDMEDIA ONLINE
Khayre oo la kulmay gudoomiyaha Aqalka Sare
Khayre ayaa xilka looga qaadey July 25 inuu loolan dhanka awoodda ah la galay Farmaajo, oo ay ku kala feker duwanaadeen doorashooyinka dalka Soomaaliya ka dhici doono.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa Muqdisho hoyga uu ka degan yahay ku qaabiley Shalay [Axad] gudoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi C/llaahi.
"Sharaf ayey ii ahayd la kulanka guddoomiyaha Aqalka Sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo maanta isoo booqday. Waxaan uga mahadceliyay kaalintii uu ka qaatay hannaanka loogu gudbayo muddo xileed cusub ee dowladda Soomaaliyeed," ayuu Khayre ku yiri qoraalla Twitter-ka soo dhigay.
Xasan Cali Khayre ayaa xilkiisa ku waayay mooshinka Farmaajo ka geeyay Gollaha Shacabka oo 7 daqiiqadood loogu codeeyay July 25, kadib markii labada dhinac uu soo kala dhexgalay loolan dhanka awoodda ah, iyagoo ku kala feker duwanaaday doorashadda.
Maalin kahor, Ra'iisul Wasaarihii hore ayaa soo dhoweeyay in dalku doorsho aado, waqtiga & nooca doorashadana laga heshiiyay iyada oo laga fogaanayo muddo kordhin. Waxuuna ku baaqayaa fulinta qodobada lagu heshiiyay. Sidii uu horayba u sheegay doorashada waxaa ku xiran amniga, dhaqaalaha & dhammaan horumarka dalka.
Suxufiyiin banaanbax ka dhigay Muqdisho
Warar 20 October 2020 16:35
Waxay ka kala yimaadeen xaruumaha warbaahinta madaxa-banaan ee Muqdisho, iyagoo codkooda isagu geeyay baaqa in lasoo daayo Wariye C/llaahi Kulmiye oo NISA u xiran.
Ilwad Elman oo la guddoonsiiyay Abaalmarin Caalami ah
Warar 20 October 2020 14:07
Beelaha ay kasoo jeedaan Wasiiradda cusub
Warar 20 October 2020 12:08
AMISOM oo hooyo carruurteeda ku hor-dilay
Warar 20 October 2020 11:55